Ukurhweba ngokujikeleza, yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga nokuziqhelanisa nezoqoqosho | Ezezimali
2 Yintoni ukurhweba ngokurhweba?
3 Ukurhweba ngokurhweba kunye nemisebenzi yentengiso
4 Iindlela zorhwebo lwe-Swing
5 Zeziphi iindlela eziqhelekileyo zokurhweba ngokurhweba
6 Uhlala ixesha elingakanani urhwebo oluqhelekileyo lokujija?
7 Iingcebiso ezisisiseko zohambo lwakho lokurhweba
7.1 Iiseyile ezimxinwa
Yintoni ukurhweba ngokurhweba?
Ukurhweba yaziwa kwihlabathi lezoqoqosho njengenye ye ubuchule okanye iindlela ezisebenza ngayo kwiimarike ezininzi zemali. Umkhuba kukuthenga okanye ukuthengisa kufutshane kakhulu nokuphela kwe- oscillation kumaxabiso kuxhomekeke koku ukuya phezulu okanye ezantsi. Olu tshintsho, kubangela ukungazinzi ezifanayo kwaye zenziwa yonke imihla nangeeveki ngokubhekisele kwixabiso.
Este uhlobo lomsebenzi ezinikiweyo indlela yokuguqula urhweboZivame ukuvulelwa ngaphezulu kosuku olunye, kodwa ubude bolu hlobo lokuziqhelanisa bunethuba elifutshane kunelo lifunyenwe ziindlela. Baye bahlala ngaphantsi kwe amacebo abandakanya ukuthenga nokubamba. Ezi zokugqibela zizicwangciso apho umntu ofuna ukutyala imali, athenga nayiphi na imveliso njengesitokhwe ukuze ixabiso lenyuke kwixesha elide. Oku kuyahluka kwiintsuku ukuya kwiiveki okanye nakwiminyaka.
Ukurhweba ngokurhweba kunye nemisebenzi yentengiso
Uninzi lwabantu abasebenzisa ukurhweba ngokuthengisa bayayazi loo nto Isitayile soqoqosho sokusebenza kwintengiso kwaye ngezo zinto zifunyenwe lokuwina okupheleleyo ukuya kwiintsuku ezi-4 ubuninzi. Abantu abafuna ukwenza olu hlobo lwendlela baqhuba uhlalutyo lobuchwephesha nge Inkqubo yexabiso elifutshane- ixesha eliphakathi apho abantu abaninzi basebenzise ithuba lokudityaniswa kwemali ngexesha elifutshane.
Xa bathenga imveliso, abathengisi abanamdla kwixabiso lemveliso ngalo mzuzu, kodwa kwi imeko yexabiso kunye neepateni zentengiso phakathi kweentsuku ezi-1 ukuya kwezi-4.
Abantu abazinikeleyo ekwenzeni urhwebo lokujija ziingcali zokumisela nayiphi na izinga lotshintshiselwano ngamaxabiso kwaye uqaphele ukuhla okwenzekayo kwaye zeziphi iimveliso ezifunwa kakhulu. Ezi ntlobo zokuqikelela zisekwe kwithemba labantu kwintengiso ethile kunye nokwehla okubonwe kwiintsuku zamva nje kwezinye iimveliso. Ngamanye amaxesha Abarhwebi abalungileyo bahlala bejonga ezo mveliso iinyanga kwaye izibonelelo kolu hlobo lobuchule zibonwa kwicala elingaphezulu nakwelingezantsi.
Iindlela zorhwebo lwe-Swing
Iinkqubo zentengiso eziqikelelayo Zisekwe kuhlalutyo olunzulu nolude ukuze kufumaneke ukuba ngawaphi amaxabiso okungena kwemveliso kunye namaxabiso okuphuma afanayo. Yintoni egqithisile, Abarhwebi kufuneka bazi ngexabiso lokuyeka esetyenziselwa ukusebenza kwiimarike.
Zonke ii-algorithms zokurhweba azikhethi kuphela ukurhweba ngokuthengisa, Abathengisi abanjalo basebenzisa ukuthengisa kwemini kwaye kunqabile ukuba basebenzise ukurhweba ixesha elide.
I-algorithms zabarhwebi, yiyo inkqubo ethembekileyo Kuya kufuneka bakwazi ukuthatha izigqibo malunga nenye indlela okanye enye. Uninzi lwazo luqhutywa ngokwezoqoqosho ziifemu ezinkulu zebhanki kwaye amashumi ezigidi achithwe ukuphucula ii-algorithms ezichaziweyo. Le yinto ekhathaza kakhulu iibhanki, kuba ngokusebenzisa ii-algorithms intengiso ezinzileyo inokufumaneka kwaye ngaphezulu kwako konke, isebenze ngakumbi kuye wonke umntu.
Namhlanje, Injongo yee-algorithms kukususa ubunzima bezigqibo ezenziwe kubarhwebi kwaye ziqale ukusebenza ngendlela efanelekileyo ngokupheleleyo umngcipheko omncinci wokungaphumeleli. Uninzi lwabarhwebi onokubaqesha namhlanje, kwanabarhwebi abebesemarikeni iminyaka kwaye bengamachule, benza iinkqubo ezininzi nge-intuition elula.
Zeziphi iindlela eziqhelekileyo zokurhweba ngokurhweba
Ubuchule bokukwazi ukwenza urhwebo lokujija Zisekwe njengoko besesitshilo intuition yezorhwebo, Nangona kunjalo, kukho izikhombisi ezininzi ezisincedayo ukuba sazi ukuba leliphi ixesha elifanelekileyo kwaye kufuneka zibe kweziphi iimveliso. Enye yezona zidumileyo zezi amanqaku eepivot, Ezi zinikwa mihla le okanye ngeveki kuninzi okwahlukileyo.
Enye ye izikhombisi sisenzo sexabiso kunye nemilinganiselo yamaza Ngaphezu kwayo yonke loo nto Iimpawu zendlela.
Abarhwebi ababhukuqayo ine iintshukumo ezomeleleyo kwimikhwa kwaye bayaqaphela ukuba ihambisa abantu ngokungxama. Kwiindlela zokurhweba zabarhwebi awusoze uhambe ngokuchasene neendlela kwaye uhlala usebenzisa i izikhombisi zamandla. Ezi zikhombisi zinoxanduva lokumisela ukomelela kwentshukumo nganye kwaye yenye yazo ezona zixhobo zibalaseleyo zokurhweba ngabarhwebi.
Xa ulungiselela Isicwangciso esiliqili sabathengisi, Abarhwebi kufuneka babonise uthotho lweetshathi ezisebenzayo apho kunokwenzeka ukuba bathengise kwiindawo ezintathu ezahlukeneyo abathengisi kufuneka bazazi kakuhle ukuze bazi ukuba yeyiphi imveliso ebalungeleyo.
Uhlala ixesha elingakanani urhwebo oluqhelekileyo lokujija?
Ukwazi ixesha elide lokuhamba ukurhweba ngobuqhetseba, Kuya kufuneka uyazi ukuba yeyiphi imeko oza kuyinyuka. Nokuba yeyiphi na oyenzayo kwindlela yakho. Kwakhona Kuxhomekeka kakhulu kwixesha ongena ngalo, kuba ayifani ukufaka umkhwa xa uqala, kunokungena xa sele ugqibile. Inzuzo ixhomekeke ngqo kwi Isakhono somrhwebi.
Iingcebiso ezisisiseko zohambo lwakho lokurhweba
Enye yeengcebiso zokuqala zeengcali zabantu abatsha ekurhwebeni ngobuqhetseba, kunjalo amakhandlela. Xa sibona amakhandlela kwiitshathi ezinkulu kakhulu, isixelela malunga a Umzuzu obalulekileyo wemveliso. Kuya kufuneka unikele ingqalelo kwezi meko, kuba imarike ikhupha abathengi kunye nabathengisi kwaye kunokwenzeka ukuba ekupheleni kwale nkqubo, iziphumo ziya kubuyiselwa umva.
Ukuba uza kuqala uhambo lwakho urhwebo lwe-swind, kuya kufuneka uyazi i-100% yokuziphatha kwamakhandlela kunye neepateni zawo ezahlukeneyo.
Xa uluhlu lwamakhandlela lwenziwa ngamakhandlela amxinwa oku kubonisa intshukumo yokuqhuma kwemveliso. Yiyo le ibizwa ngesiqhelo, ukuzola ngaphambi kwesiphango.
Ukuba awunguye Nokuba yingcali yekhandlela, unokusebenzisa umthetho we-50% ngelixa ufunda.
Kule meko, kuya kufuneka ulinde ipateni yokugqobhoza okanye yokugqobhoza ukuba idlule. Kulapho iziko lekhandlela lidlula i-50% yekhandlela lilonke.
Zininzi iipateni kuhlalutyo lwesibane Ziqinisekisiwe xa ukuvalwa kwekhandlela langoku kudlula indawo esembindini womzimba wekhandlela elidlulileyo. Ke ngoko, xa imarike ilungisa imeko yangaphambilini, ukuba ulinde ukubona ikhandlela elisondeleyo lidlula ubuncinci bomzimba wekhandlela elidlulileyo, (i-50% yomzimba wekhandlela elidlulileyo), kukho amathuba aphezulu ukuba uhlobo "lokugqojozwa" okanye "lokugubungela" luyila, olunezichaso ezinyusayo.
Lo mgaqo kufanele ukuba ube luncedo kubo bonke abo bengekacandi Ukufunda iipateni zetshathi zezibane. Kodwa ndincoma ukuba ngokuthe ngcembe udibanise olu lwazi kwibhetri yakho yezixhobo, ukuba uza kugxila kwelakho osebenzayo "kurhwebo lwe-swing".
Kwelinye icala, amakhandlela anokubonwa ngohlobo lwefestile kufuneka atsala umdla wakho opheleleyo kuba abaluleke kakhulu, ngakumbi kubantu abaqala uhambo lwabo kwihlabathi lokurhweba.
Si ujonge iigrafu zakho, ngequbuliso udibana ne- umsantsa okanye umsantsa ngokwendlela ecace gca yokuhlaKuthetha ukuba indlela yokuziphatha ilawulwa sisibonelelo, Oko kukuthi, iqela elithengisayo; Oku kwenzeka ngenxa yeemeko ezahlukeneyo ezinje ngexa iimpahla, iimveliso okanye iinkonzo zinikezelwa ngendlela encinci.
Kwelinye icala, ukuba ngaphakathi kweseshoni efanayo kuyenzeka oko umsantsa uvala ngokunyuka okuphezulu Ngokubhekisele kwindawo apho isikhewu savuleka khona, oko kubizwa ngokuba yi-bearish gap, umzekelo, kuba ulawulo lubuyisiwe, emva koko oko kwaziwa njengekhandlela elimhlophe kufunyenwe.
Esinye isalathiso esibalulekileyo sihlala siyi ukujula kobunzulu. Xa imeko ecacileyo iboniswa nokuba iphantsi okanye iphakanyisiwe, indlela elungileyo yokwazi ukuba uyaluvula utshintsho kwimeko ngokuchanekileyo ngokulinganisa ubunzulu boku kujika. Njengomgaqo ngokubanzi, ukuba utshintsho luyenzeka ngokutsiba okuncinci, oko kukuthi, aludluli kwi-50% yenqanaba elidlulileyo lokunyanzelwa, kuya kuba nzima kakhulu ukuba imeko ibuye umva. Oko kukuthi, ukuba yayikumphezulu ekuqaleni kwaye iijingi zincinci kakhulu, imeko ephezulu iya kuqhubeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ukurhweba ngokurhweba, yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga nokuziqhelanisa nezoqoqosho
UCarlos S. sitsho
Ubunzulu bejingi sisalathiso esihle. Ndiyabulela kwintsebenzo ekhethekileyo yorhwebo lukaRubén Vilela, uGerardo Ortega, uJosef Ajram Tares, uFernando Martínez Gómez-Tejedor, uCarlos doblado kunye noMarcos Antonio Morales, ndiqhube kakuhle kakhulu. Babezizalathiso zam ezinkulu.
Phendula uCarlos S
Icandelo lebhanki lishushu kakhulu ngenxa yokudityaniswa okunokwenzeka